Indlela yokukhokha izintela ngokusebenzisa "Sberbank Online"? Lo mbuzo iyathakazelisa abantu abaningi. Phela, "Savings Bank" amakhadi bayindlala kakhulu. Futhi, ngokufanele, isevisi asekeleke ku-Inthanethi esisiza komzamo ekhaya ningasakwazi ukukhokha izikweletu namarisidi - kakhulu. Kodwa akubona bonke abantu uyazi ukuthi angalenza kanjani isikweletu ukubuyiswa kwemali. Kungakhathaliseki ukuthi kwenzekani - ku Umbuso izikweletu noma izintela kanye inhlawulo. Iqiniso liwukuthi - kwimodi inthanethi esebenzisa izinyathelo ezilula, wena kalula ukukhokhela intela ngokusebenzisa "Sberbank Online". Akukona njengoba kunzima njengoba kungase kubonakale efika kuqala.
Iqala Yiqiniso, ukuxhuma kule sevisi. Kodwa, njengoba umkhuba imibukiso, iningi izakhamuzi unesithakazelo indlela yokukhokha ngisho naphambi yalo. Lokhu kusho ukuthi uxhumano ingase yeqiwe. Yini okulandelayo?
Manje, uma ubhekene bemangele kanjani ukukhokha izintela ngokusebenzisa "Sberbank Online" iyadingeka ukuze kudlule inqubo ukugunyazwa ekhasini esemthethweni isevisi. Lokhu kwenziwa kusetshenziswa umazisi nephasiwedi. Lezi idatha kufanele ukuthi wamukele ngaphambili, yokuxhuma ngqo kungenzeka ngokusebenzisa isevisi ye "Savings Bank".
Yiya main page "Sberbank Online" bese ufaka idatha kwesokudla. Manje udinga ukuqinisekisa ukuthi nguwe umnikazi we-akhawunti. Kuselula exhunywe ibalazwe, uzothola umlayezo nge ikhodi yokuqinisekisa. Kumele langena emkhakheni esikrinini. Ukulungele? Sibe sesiqhubeka ukusebenza isevisi.
Indlela yokukhokha izintela ngokusebenzisa "Sberbank Online"? Uma udlulisa saziso yinqubo ukugunyazwa phezulu ukuya nto "Izinkokhelo nokudluliswa". Itholakala yonke imisebenzi kungenzeka ukuthi kungenziwa ezidingekayo.
Ngo ohlwini oluvelayo, phawula "Amaphoyisa omgwaqo, izintela, imisebenzi". Ungacindezlea kakade kuleli qophelo, noma ungakhetha ezahlukene eziningi. Kuyinto ekahle izimo lapho ubhekene ebambe inohlelo yokukhokha.
Yini ukuba uchofoze? "I-Federal Tax Service." Uma ekhasini evelayo, khetha "Ukukhokhwa kwentela phezu Inkomba idokhumenti." Lokhu kukhetha esheshayo. Amanothi ezilandelayo umthombo imali. Ifanele "ikhadi / akhawunti". Indlela yokukhokha izintela ngokusebenzisa "Sberbank Online"? Document Index kuzokusiza nale.
Kungenzeka uye waphawula ukuthi ngemva kwalezi nemingcele kufanele kube umucu ongenalutho, edingekayo. Lapha kulotshiwe idokhumenti Inkomba. Ubizwa ezisohlwini yokukhokha. Ukulungele? Bese uchofoza inkinobho "Okulandelayo" bese ulinda. Uyoba ulwazi nokukhokhwa inkokhelo.
Ezimbili uphinde ukuqinisekiswa
Yini manje? Okulandelayo udinga ahlole yonke imininingwane. Futhi ukuphendula umbuzo kanjani ukukhokha izintela ngokusebenzisa "Sberbank Online", kufanele babhale inani, hlinzeka ukukhokhelwa. It kuvezwa yakho umyalo wokukhokha.
Qinisekisa ukuthi idatha ekhishwe, thayipha lemali oyifunayo sokukhokha intela. Manje uchofoze "Okulandelayo". Kuyadingeka ukuqinisekisa ukusebenza. Ngenxa yalesi ifoni uzothola umlayezo. Kuyinto ikhodi yokuqinisekisa. Yifake emkhakheni ezifanele - futhi kwenziwa. It uhlala kuphela ukuphrinta kokuthola lokukhokha, uma uludinga. Akukho nzima, angithi? Kodwa lokhu akulona VO, kanjani ukukhokha izintela ngokusebenzisa "Sberbank Online".
Kunendlela ukusesha VAT. Yisimo esivamile. Ukuze lelisu, udinga ukukhetha "Izinkokhelo nokudluliswa" - "Amaphoyisa omgwaqo, izintela, imisebenzi" ku "Internal Revenue Service". Bese ukhetha "Sesha yokukhokha" - "Ngo-VAT".
Yini manje? Thayipha ewindini elivelayo, ngamunye wentela Identification Number. Uhlelo abayofuna umamukeli, bese ungakhetha uhlobo lokukhokha. Bese - ucacise, amalungiselelo ukukhokha.
Empeleni, yilokho kuphela. Ekugcineni, kubalulekile ukuqinisekisa izenzo zakho ngosizo imfihlo ikhodi. Yena, njengoba kuzo zonke izimo langaphambilini, uyofika kuselula njengoba umlayezo. Yilokho. Kusukela manje, kusobala ukuthi ukuba akhokhe izintela ngokusebenzisa "Sberbank Online" phezu TIN hhayi kuphela. Akunzima njengoba kungase kubonakale efika kuqala. Into esemqoka - ungesabi isenzo esiwujuqu. Futhi siqiniseke ukuba sifake uhlole ngaphambi kokukhokha izimali imininingwane yasebhange. Futhi yakho futhi umemukeli.
Kanjani futhi yini ukukhuluma mayelana nentombazane ocingweni